Home » Creative Writing » ဝက်စာ ……
ကျနော် ၄ တန်းက စပြီး ၉ တန်းအထိ ဘုန်းကျောင်းမှာ နေခဲ့ တော့ 
ရေးပြီးစလစ်လေ ပြန်မပြင်ပါဘူး… အခုလည်း ကြုံတိုင်းချက်နေရတာ
ဒီနေ့တော့ ဒီမှာ ခွဲရေးနိုင်တဲ့ ပွဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ အရီး နိုင်မှာလို့။
ဝက်စာ မှာ အမှာစာ တွေ ပါးနေလို့။ :-))
ခွစ်ကို သတင်းပေးပြီးကြောင်းနဲ့ ဝီလီရဲ့ပုံ ပို့ပါမည့်အကြောင်း…
.. ဂရိ ကလည်း အီးယူ အကူ အညီ နဲ့ နေ စပိန် နဲ့ အီတလီလဲယဲ့ယဲ့ .
သူကြီး ဆီက တစ်သိန်း ရ ခါ နီး လူတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရအောင် ယူထား ကြလော့ ….
အာရပ်ကမ္ဘာကလည်း ကျီးလန့်စာစား ၊ ပူတင်ကလည်း တစ်ရန် …
မန်း​လေးက ဇီးဘန်းနီ​ကျောင်းမှာ အဲ့ဒီဟင်း​ပေါင်းစားဖူးတယ်​ ။
ညစာ ဟင်းပေါင်းနဲ့စားရင် နောက်နေ့မနက် ဝမ်းအတော်ကောင်းတယ် ကိုရင်ရဲ့…..
အကြိုက်ဆုံးထဲ ဟင်းပေါင်းပါတယ်… ဒါပေမဲ့ လုပ်မစား ဓါတ်ဗူး။
ဟင်းတွေပေါင်းပေါင်းလိုက်တော့ ရက်တွေကြာလာတော့ သိုးမသွားတာ နွေးနေအောင် မီးဖိုပေါ်ထားလို့လား သိချင်တာ
ဟုတ်တယ် မီးနဲ့ အမြဲ နွှေးပေးထားရတယ်။ ရေထည့် ထည့် ပေးပေါ့ ။
ကိုရင်တောပျော် ပြောသလို နွေးနေအောင် မီးဖိုပေါ်အမြဲတင်ထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ။ လက်ကျန်ဟင်းနဲနေလို့ စုရမယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာ ကိုရင်ကြောင်ဏှာကို ဖြေထားတဲ့အတိုင်း ….
ကျွန်းပေါ်မှာ နေတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းဆီ နေ့တိုင်းသွား…ရေခပ်တင်ပေး၊ တံမြတ်စည်း လှည်းပေး၊ ထင်းခွဲပေးနဲ့… လုပ်အားဒါန မှန်မှန်ပြုပေးခဲ့ဖူးတယ်။
ရန်ကုန်က မြို့ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆွမ်းကွမ်းပေါတော့ လက်ကျန်ကို ကပ္ပိယနဲ့ ဘုန်းကြီးအမျိုးတွေကြိတ်လိုက်လို့ ဟင်းပေါင်းရှိမယ်မထင် ။ ဆင်ခြေဖုံးအရပ်တွေနဲ့ နယ်တွေမှာလောက်ပဲ ဟင်းပေါင်းချက်တဲ့ဓလေ့ကို သတိထားမိတယ် ။
တရုတ်နှစ်ကူးရင်လည်း ညဘက် အဲလို လုပ်ကြတယ်။ ဟင်းပေါင်းတဲ့။ နဂိုကတည်းက တရုတ်စာ မကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ တရုတ်ဟင်းပေါင်းလည်း မကြိုက်။
ထိုင်းတွေလည်း ဟင်းပေါင်းတည်တယ် မပြုံး ။ စားလို့အတော်ကောင်းသလို ၊ အလွန်စပ် ။ သူတို့က ဟင်းပေါင်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သက်သက်ချက် ၊ ၂၄-နာရီ မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့တည်ပြီး စီးပွါးဖြစ် ရောင်းပါစားတာ…
အဲ.. ၀က်သားတုံး ၃ထပ်သားတွေဖယ်ရင်ပေါ့လေ..။
အာဟိ… အဲသည့်ဟင်းထဲက “ထပ်သရီး” မှ စားလို့ကောင်းတာ ၊ နူးအိနေတာပဲ…
အမှန်တော့ ချဉ်ပေါင်ရောမှကောင်းတာ ၊ ပါးရှားတဲ့အရပ်မို့ မကျည်းရည်စွက်ရတာ သဂျီးရဲ့ ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ညီညွတ်သလားမမေးနဲ့ ။ ဒါပေသည့် ရောခါနီးရင် အစာအချင်းချင်း ဓာတ်တည့်မတည့် ဆင်ချင်ရသေးတယ် ။
မော်လမြိုင်ကယောက်ခမတွေအကြိုက်ပေါ့ သူတို့ကတော့ ကျောင်းဟင်းလို့ခေါ်တာပဲ
မော်လမြိုင်ဘက်မှာတော့ သရက်သီးခြောက် ၊ မရမ်းပြားခြောက် ၊ ကြက်ပေါင်သီးတွေနဲ့ရောချက်တယ် ။ သရက်သီးကုသလတည်ကတော့ မဆလာအနံ့ပြင်းလို့ ကျနော်တော့ ထည့်မချက်ဘူး ။ နောက်ပြီး ငါးတို့ ငါးခြောက်တို့ပါရင် အရသာပျက်တယ် ။ သရက်ချဉ်သုပ်ကျန်ရင်လည်း မထည့်ဘူး … ခါးသွားတတ်လို့…
ဂျူနိုလေးရော ကြိုက်သလား ကြောင်ခမနို…
ရွာမှာရောင်းတဲ့ တရုတ်ထမင်းပေါင်းအစက အဲသည်ကလားမသိ ။ ဟောင်ကောင်မှာလည်း အသားကင်အခေါက်ကင်ဆိုင်တွေက ပိုသမျှ အသားတွေကို နောက်နေ့ဆို အသီးအရွက် ကော်ရည်နဲ့ရောပြီး ထမင်းပေါ် ပုံရောင်းသဗျ ။ အလုပ်သမားတွေကတော့ ဈေးသက်သာ ၊ အသားများများ အသီးအရွက်စုံမို့ တီးကြတာပဲ ။ စားကြည့်တော့ အရသာက မြန်တျန့်ထမင်းပေါင်းနဲ့ အတော်ဆင်တယ် … ။
ညစာစားပြီးရင် အသုပ်ကလွဲလို့ ပိုတဲ့ဟင်းကျန်တွေကို ကြွေရည်သုတ်ချိုင့်ထဲထည့်ပြီး စုထား (ရေငွေ့ ချွေးမကျအောင် အဖုံးက ရေစက်တွေကို လမ်းကြုံရင် ခါထုတ်ပေး) ။ ၃-၄ ရက်နေလို့ တစ်နပ်စာလောက်စုမိရင် ချဉ်ပေါင် (သို့) မကျည်းရည်လေးနဲ့ ငပိစိမ်းစား သဘောလောက်စွက် ၊ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်စိမ်းကို ဓားနဲ့မွှန်းပြီးထည့် ။ အရသာလည်းကောင်း … ဈေးဖိုးအလေအလွင့်မရှိ … ဝမ်းလည်းမှန်တယ် မအိရဲ့….
အဲလို အကြာကြီးထားတဲ့ ဟင်းပေါင်းတော့ မစားဖြစ်ဘူး… ဒီနေ့ညနေကျန် နောက်နေ့မနက် အကုန်ရောနွေးတော့ စားဖူးတယ်… ဒါလဲ ဟင်းပေါင်းပဲလို့ ခေါ်တာပဲတဲ့… အကြိုက်ဆုံးကတော့ ထပ်သရီး.. ပီးရင် ပဲပြုတ်ပါရင်လဲ ကြိုက်တယ်… ပဲပြုတ် ပူပူက အစေ့အတွင်းထိ ပူတော့ စားကောင်းပါ့… ခရမ်းချဉ်သီး ငပိချက် ဒါမှမဟုတ် ပဲငပိပါရင် ပိုလေးပြီး စားကောင်းတယ်… ပိန်းနဲသီး ပါလို့ကတော့ ဇွန်းကို မချတော့တာ… ပူပူနဲ့ကို မှုတ်လိုက် နောက်တဖတ် ခပ်စားလိုက်နဲ့ … ဂလု သတိပြန်ရသွားပြီ…
ကျနော်ကတော့ ဂေါ်ဖီကြော်နဲ့ ခရမ်းသီးပါတာ ပိုကြိုက်တယ်…
ပဲငါးပိလက်ကျန် ငါးခြောက်ပါလို့ကတော့ အရသာက လေးပင်နေတာ ကိုရင်ရဲ့…
အညာကိုပြန်လည်ရင် အမေကြီး(အဘွား) က အမြဲ လုပ်ကျွေးတယ်
အညာစတိုင်လ် ဟင်းပေါင်း / ဟင်းလေးအိုးလည်း ကောင်းတာပဲ ကိုရင်နို…
ဝက်သားဆီပြန်လုံးချက်ကို လက်ပံခြောက် မလွှပွင့်ခြောက် ပုန်းရည်ကြီး (တချို့က သရက်သီးခြောက်) တွေရောပြီး ဆီပြန်အိအိလေးချက်ထားတာ အလွန်ထမင်းမြိန်တယ် ။ ဟင်းချွေးမကျရင် တော်ရုံနဲ့လည်း မသိုးဘူး… ၊ အညာမှာကတော့ မီးငွေ့ငွေ့နဲ့ အမြဲတည်ထားတတ်ကြတော့ အရသာက ဆိုဖွယ်မရှိ… ရှလွတ်စ်
ဟင်းပေါင်းက ရသာစုံ… အစပ်အဟပ်ကောင်းကောင်းကို စားမိရင် တမ်းတမ်းတတကို ဖြစ်ပါလေရော ။ ဝ လည်း မစားရတာကြာပြီဖြစ်လို့လွမ်း ၊ ချွေတာရေးအတွက်လည်း အသုံးဝင်တာမို့ ပို့စ်တင်လိုက်တာ ။
ဘကျောက် သြစတေးလျ ရောက်နေတဲ့ဘူမိ က ဦးတင်ငွေ တို့ဦးခင်မောင်ဝေ တို့ ကို သိလား ဗျ
ဦးတင်ငွေတို့ဦးခင်မောင်ဝေတို့ က အာစရိဂိုဏ်းဝင် စီနီယာကြီးတွေခင်ဗျ…
ဘကျောက်တော့ မီလုပ်ပါနဲ့ဗျာ… သားက ငယ်ငယ်လေးရှိပါသေးတယ်…
အခု.. အယ်အေကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရော..။ ၀ါရှင်တန်အသစ်လာတော့မယ့်.. အမေရိကဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ရောက… ဘူမိဘွဲ့ရတွေ…။
အဲသဟာကြောင့် … စီနီယာ အာစရိတွေကို မကလန်ရဲတာ…
ခေတ်ကောင်းမှ လာလည်တော့မယ် သဂျီးရေ…
ည ၁၂ နာရီခွဲ ဗိုက်ဆာနေပါတယ်ဆို ဒါကို ဖတ်မိတယ် အူးလေးရယ်
ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အမြဲစားနေကျ . . ညနေစာဆို ထမင်းကြမ်းနဲ့ ဟင်းပေါင်း . . .
ဟင်းကျန်တွေကို ဝဲမပစ်နဲ့ ၊ မလေလွင့်အောင် ပြန်ချက်ရင် တစ်နပ်ဖြစ်တယ်…
ချွေ တာ ကြ ပါ သူဋ္ဌေးလောင်းတို့…
အူးလေးကျောက်ရေးပြမှ ငယ်ငယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘဝက စားခဲ့ရတဲ့ ဟင်းလေးပေါင်းကို သတိရလိုက်တာ . . . ဟင်းလေးပေါင်း မသိုးအောင်လို့ ညနေပိုင်းဆိုပြန်နွေး နေ့ဆွမ်းစားခါနီး ပြန်နွေး ဟင်းပေါင်းစုံဆိုတော့ အရသာကလည်း ပေါင်းစုံပဲ ရက်နည်းနည်းကြာလာရင်တော့ ဝမ်းမခိုင်သူများ စားမိရင် ပန်းသခင်ဖြစ်တတ်ပါတယ် . . .
ကျနော်ကတော့ တစ်ပါတ်စာကို စနေညမှာ အပြတ်ဖြတ်တယ်ဗျ…
ဂျူးမြစ်လေးလည်း ပါတာပေါ့ ကိုရင်ရယ်…